Mudaaharaadyo Ka Bilaawday Dalka Pakistan Kadib Markii Nin Wasiir Ah Uu Ugefay Nabiga SCW.
Sunday November 26, 2017 - 11:16:01 in Wararka by Super Admin
Wadanka Pakistan ee dhaca bartamaha qaaradda Asia waxaa ka bilaawday dibad baxyo aad u xooggan oo ay dhigayaan malaayiin qof muslimiin ah kadib markii Nin wasiirka uu ugefay diinta islaamka.
Mudaharaadyado oo ah kuwo rabshado xoogan wata ayaa saameeyay dhammaan magaalada caasimadda ah ee Islam'abaad, waxana ku dhaawacmay 140 qof halka uu ku dhintay mid ka mid ah booliska rabshada ka hortaga.
Rabshadahan ayaa ka bilowday kadib markii mid ka mid ah wasiirada dowladdaasi uu muran galiyay in Nabi Maxamed SCW uu yahay khaatamul Anbiyaa (kii nabiyada ugu dambeeyay), kadibna dadwayne badan ayaa xukuumadda ka codsaday in la casilo wasiirkaasi, sidaasna waxaa wadanka ugu faafay mudaaharaadyo ay muslimiintu dhigayaan.
Kumanaan katirsan ciidamada Booliska ayaa awoodi waayay in ay ka hortagaan rabshadaha waxaana hadda loo baahday in ciidamada milatariga la dalbado si loo kala kaxeeyo mudahaaradayaasha oo jidadka dhan xiray.
Dalka Pakistan waxa ku nool dad ku dhaqma dariiqo baadil ah oo la yiraahdo Qaadiyaaniya, taasi oo aaminsan in ay Nabi Maxamed uu Nabi kale ka dambeeyay, waxanay saamayn ku yeesheen xukuumadda sida uu hadda wasiirkan dhibaatadu ka dhalatay uu ku dhawaaqay.
Wasiirka Gaashaandhigga dowladda dabadhilifka Pakistan ayaa ugu baaqay in ciidamada melleteriga ay farageliyaan xaaladda islamarkaana ay xakameeyaan dadka dibad baxyada ka dhigaya magaalada Caasimadda ah, wargeys maxalli ah ayaa sheegay in Ururrada islaamiga ah ee kajira Pakistan ay taageerayaashooda ugu baaqeen in ay dibad baxyo hor leh ka oogaan magaalooyin ay kamid yihiin Laahoor,Karaaji iyo Ruwal Bindi.
Dhinaca kale dowladda Maraykanka ayaa ka hadashay nin dhawaan xabsiga ay ka siidaysay dowladda Pakistan kaasi lagu magacaabo Xaafid saciid oo ay ku sheegeen hogaamiye sare oo katirsan xoogaga islaamiga ah ee Hindiya dagaalka kula jira, waxayna sheegtay in ay aad uga xuntahay in ninkaasi la sii daayo.
Sheekh Xaafid Saciid ayaa dowladda Maraykanka iyo hindiyaba ugu jira liiska waxa ay ugu yeeraan argagixisada, waxayna dowladda Pakistan ugu hanjabeen in calaaqaadkoodu xumaan doono haddii ninkaasi ay sii dayaan balse handadaadaas Pakistan dheg jalaq umasiin oo waa ay sii daysay Sheekh Xaafid.